यी युवतिले कारको छ्तमा च’ढेर देखाइन् यस्तो त’मासा ! देखेर सबै है’रान ! – Life Nepali
यी युवतिले कारको छ्तमा च’ढेर देखाइन् यस्तो त’मासा ! देखेर सबै है’रान !
बीच सडकमा रोकिएको कारको छतमा एक युवतीले देखाएको तमासा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । घ’टना छिमेकी मुलुक चनिको हो । पति–पत्नीबीच झ’गडा परेपछि ती महिला कारको छतमा उ’क्लिएर त’मासा देखाउन थालेकी हुन् । शियाङ्शीमा भएको यो घ’टनामा उनी कारको छतमा चार मिनेटसम्म उभिएकी थिइन् । उनको ह’र्कतका कारण ट्राफिकमा अ’वरोध पुगेको थियो । उनका पतिलाई पछि प्रहरीले प’क्राउ गरेको थियो ।
घ’टनाको भिडियो भाइरल भएपछि प्रहरीले पति सवारी चालक अनुमतिपत्र विना नै गाडी चलाउँदै गरेको अवस्थामा प’क्राउ गरेको थियो । घ’टना केही समय पहिलेको हो, पतिपत्नीले एसयूभीभित्र झ’गडा गरेका थिए । सेतो होन्डा एसयूभी चौबाटोमा ट्राफिक लाइटमा रोकिएको बेलामा अचा’नक महिला कारबाट बाहिर निस्किइन र पतीसँगको रि’स कारमा’थि उ’क्लेर पो’ख्न थालिन् । उनले आफ्नो पतिले आफूलाई बे’वास्ता गरेको भन्दै यस्तो रि’स पो’खेको बताएकी छिन् ।
रिसको सुरमा उनले छतमा गो’डा बजारेकी थिइन् । ट्राफिक बत्ती हरियो भएपछि पनि महिला एसयूभीको छतमा बसिरहिन् अनि आफू र अन्य चालकहरूलाई जो’खिममा पारिन् । अन्य चालकले त्यो कारबाट ब’चेर गाडी हाँकेको देखिन्छ । केही समयको अन्तरालमा उनी पुनः छतबाट ओ’र्लिएकी थिइन् । पतिलाई लाइसेन्स नबोकेकोमा १२ सय ५० युआन ज’रिवाना गरियो र १४ अंक घटाइयो । पत्नीलाई चे’तावनी दिएर छोडियो ।
Previous पाँच तारे होटलमा दुईवटा केराको बिल सुन्दा झन्डै हो’स उ’डेन यी अभिनेताको !
Next एकतर्फी मायामा पा’गल हुन्छ्न , यी पाँच राशी भएका मानिसहरु !